လူသားတွေအတွက် အကြီးမားဆုံး ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အန္တရာယ် ၅ မျိုး – Gentleman Magazine
လူသားတွေအတွက် အကြီးမားဆုံး ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အန္တရာယ် ၅ မျိုး
လူသားတွေဟာ ဘေးဒုက္ခတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်။ တချို့ ဒုက္ခတွေကတေည့ လူသားမျိုးနွယ် တစ်ခုလုံးကို မျိုးသုဉ်းသွားအောင် ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့အဆုံးသတ်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဟောပြထားတာ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာဟာ သူ့ဘာသာ အဆုံးမသတ်ပဲ လူသားပယောဂနဲ့ အဆုံးသတ်သွားရင်ရော?? ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်က စာရေးဆရာတွေ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက မှန်းဆပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒိထဲက အဖြစ်နိုင်ဆုံး အန္တရာယ် ငါးမျိုးကတော့
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နူကလီးယားလက်နက်နှစ်ခုပဲ စစ်ပွဲထဲမှာ အသုံးပြုရပါသေးတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ဂျပန်အပေါ် ကြဲချခဲ့တဲ့ ဗုံးတွေပါ။ စစ်အေးကာလမှာတော့ နူကလီးယားလက်နက်တွေ တောင်လိုပုံအောင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နူကလီးယားစစ်ပွဲဟာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ မဖြစ်သေးတာပါ။
ကျူးဘား ဒုံးပျံကိစ္စကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ အဲဒိကိစ္စလေက် မထင်ရှားတဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုလေးတွေ အမေရိကန်နဲ့ ဆိုဗီယက်ကြား ခဏခဏ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မေဂျာပါဝါနှစ်ခု ထိပ်တိုက်တွေ့ကြခြင်းဟာ လူသန်း ရာပေါင်းများစွာကို သေကြေစေမှာပါ။
လက်နက်က ထွက်လာတဲ့ ရေဒီယို သတ္တိကြွ ပစ္စည်းတွေ ရန်ကလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆို ဗုံးချထားတဲ့ နေရာမှာ သုံးလအတွင်း လူပြန်နေထိုင်နိုင်ပေမယ့် Cobalt Bomb တွေဆိုရင် နှစ်တစ်ရာလောက်ထိ လူပြန်မနေနိုင်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကမ္ဘာပျက်စေတဲ့ လက်နက်တွေပါ။
နူကလီးယားလက်နက်တွေကြောင့် လယ်ယာ မစိုက်ပျိုးနိုင် ဖြစ်သွားပြီး ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် ဖြစ်သွားရင် လူ ဘီလျံနဲ့ချီပြီး အစာငတ်မွတ်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးကြရမှာပါ။ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ ရောဂါဘယတွေနဲ့ သေဆုံးကြမှာပါ။
ကပ်ရောဂါတွေဟာ စစ်ပွဲတွေထက် လူပိုသတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သဘာဝကပ်ရောဂါတွေဟာ လူသားမျိုးတုန်းဖို့ထိ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကပ်ရောဂါဖြစ်ရင် ရောဂါပိုးကို ခုခံနိုင်တဲ့ လူတစ်ချို့ ကျန်ခဲ့လေ့ရှိပြီး အဲဒိလူတွေရဲ့ မျိုးဆက်တွေက ရောဂါကို ပိုလို့ ပိုလို့ ခံနိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆစ်ဖလစ်ရောဂါဟာ ဥရောပမှာ လူသတ်ရောဂါကနေပြီး ပုံမန် နာဖျားမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဇီဝအင်ဂျင်နီယာနည်းနဲ့ ရောဂါတွေကို ပိုပြီးဆိုးသွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုးကို ဇီဝပြုပြင်ကြည့်ရာမှာ ကူးစက်သေဆုံးနိုင်မှုနှုန်းဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းလောက်အောင် တိုးလာပါတယ်။
ခုလောလောဆယ်မှာတော့ ဇီဝလက်နက်တွေ အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ ခက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်ကျရင် ဇီဝနည်းပညာဟာ ဈေးသက်သာပြီး ပိုလွယ်ကူလာတာနဲ့အမျှ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေ ဇီဝလက်နက် အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်ကြဖို့နှုန်းဟာ ပိုပြီးမြင့်မားလာပါတယ်။
ဉာဏ်ရည်ဆိုတာ အရမ်းအစွမ်းထက်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားလို့ အခြား အဆမတန် အရွယ်ကြီးမားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အနိုင် တိုက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ကွန်ပျူတာကို ဉာဏ်ရည်ရှိလာအောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင် နေကြပါတယ်။ စကားသံနဲ့ အမိန့်ပေးခိုင်းစေခြင်းကစပြီး AI ခေါ်တဲ့ အသိဉာဏ်တုထိပါ။
တကယ်လို့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ အသိဉာဏ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိလာရင် သူတို့ဟာ ကောင်းတာတွေပဲ လုပ်မယ်လို့ ဘယ်သူ အာမခံနိုင်ပါ့မလဲ?? သူတို့လဲ လူတွေလိုပဲ တခြား သတ္တဝါ သက်ရှိအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ချင်ကြမှာပါ။ ကွန်ပျူတာတွေ စွမ်းအားမြင့်တာနဲ့အမျှ ဉာဏ်ရည်လဲ တိုးတက်လာမှာပါ။ လူဉာဏ်ရည်ရဲ့ အဆတစ်ရာ သာတဲ့ ကွန်ပျူတာဟာ လူသားတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မကြိုးစားနိုင်ဘူးလား။ Terminator နဲ့ Matrix လို ဇာတ်ကားမျိုးတွေကို ကြည့်ရင် သိရှိနိုင်ပါတယ်။
နာနို နည်းပညာဆိုတာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအပေါ်မှာ အက်တမ်၊ မော်လီကျူးအဆင့်ထိ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာပါ။ အဲဒါဟာ သူ့ချည်းတော့ အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ အရမ်းအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ။ ပြသနာကတော့ ဇီဝလက်နက်တွေလိုပဲ သူ့ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းလမ်း မရှိတာပါ။
အထင်ရှားဆုံးပြသနာကတော့ နာနိုပြသနာဟာ အက်တမ်စကေးအထိ အတိအကျနဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို အလျင်အမြန် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒါကို အသုံးပြုပြီး လက်နက်တွေ ထုတ်လုပ်ကြရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။
နာနိုနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်လို့ရမယ့် လက်နက်တွေဟာ သေနတ်တွေတင်မကပဲ အရွယ်အစား အရမ်းသေးငယ်တာတွေလဲ ပါပါလိမ့်မယ်။ အဆိပ်လက်နက်တွေကို ကိုယ်ထိစေချင်တဲ့လူတွေပဲ ထိအောင် တိုက်တာမျိုး၊ အရမ်းသေးငယ်တဲ့ စက်ရုပ်လေးတွေနဲ့ လူတွေကို စောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နူကလီးယား နည်းပညာနဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုလဲ နာနိုနည်းပညာ လက်ဝယ်ရှိသူတွေက သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်လိုက်ပါ။ တိတ်ဆိတ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဂြိုလ်သားတွေကို မတွေ့ရသေးတာက သက်ရှိဖြစ်တည်နိုင်တဲ့ ဂြိုလ်တွေဟာ အရမ်း ရှားပါးလို့လား။ အသိဉာဏ်မြင့် မျိုးစိတ်တွေပဲ သူ့တို့ဘာသာ ဖျက်စီးမိပြီး ကိစ္စတုံးသွားကြတာများလား။
ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်သေးတဲ့၊ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အနာဂါတ်တစ်ခုက အရှေ့မှာ စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေ မရှိမှ ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ ပညာရှင် ခပ်ရူးရူးတွေ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေက ခုချိန်မှာ ဘာတွေ ကြံစည်နေလဲဆိုတာ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ အပေါ်က ကပ်ဘေး လေးခုအပြင် အခြား မသိနိုင်သေးတဲ့ အရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
GM ရဲ့ တခြား ဗဟုသုတနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လူသားတှအေတှကျ အကွီးမားဆုံး ဖွဈလာနိုငျမယျ့ အန်တရာယျ ၅ မြိုး
လူသားတှဟော ဘေးဒုက်ခတှေ ကွုံတှရေ့တယျ။ တခြို့ ဒုက်ခတှကေတညေ့ လူသားမြိုးနှယျ တဈခုလုံးကို မြိုးသုဉျးသှားအောငျ ခွိမျးခွောကျနိုငျပါတယျ။ ဘာသာတရားတိုငျးမှာ ကမ်ဘာ့အဆုံးသတျနဲ့ ပါတျသတျပွီး ဟောပွထားတာ ရှိပါတယျ။ ကမ်ဘာဟာ သူ့ဘာသာ အဆုံးမသတျပဲ လူသားပယောဂနဲ့ အဆုံးသတျသှားရငျရော?? ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အရငျက စာရေးဆရာတှေ၊ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ မှနျးဆပွခဲ့ပွီးပါပွီ။ အဲဒိထဲက အဖွဈနိုငျဆုံး အန်တရာယျ ငါးမြိုးကတော့
ကမ်ဘာပျေါမှာ နူကလီးယားလကျနကျနှဈခုပဲ စဈပှဲထဲမှာ အသုံးပွုရပါသေးတယျ။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈက ဂပြနျအပျေါ ကွဲခခြဲ့တဲ့ ဗုံးတှပေါ။ စဈအေးကာလမှာတော့ နူကလီးယားလကျနကျတှေ တောငျလိုပုံအောငျ ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ နူကလီးယားစဈပှဲဟာ လုံးဝမဖွဈနိုငျတာ မဟုတျပါဘူး။ အဲဒါဟာ မဖွဈသေးတာပါ။
ကြူးဘား ဒုံးပြံကိစ်စကို အားလုံးသိကွမှာပါ။ အဲဒိကိစ်စလကျေ မထငျရှားတဲ့ ထိပျတိုကျတှမှေု့လေးတှေ အမရေိကနျနဲ့ ဆိုဗီယကျကွား ခဏခဏ ဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ မဂြောပါဝါနှဈခု ထိပျတိုကျတှကွေ့ခွငျးဟာ လူသနျး ရာပေါငျးမြားစှာကို သကွေစေမှောပါ။
လကျနကျက ထှကျလာတဲ့ ရဒေီယို သတ်တိကွှ ပစ်စညျးတှေ ရနျကလဲ ရှိပါသေးတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ဆို ဗုံးခထြားတဲ့ နရောမှာ သုံးလအတှငျး လူပွနျနထေိုငျနိုငျပမေယျ့ Cobalt Bomb တှဆေိုရငျ နှဈတဈရာလောကျထိ လူပွနျမနနေိုငျအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ အဲဒါဟာ ကမ်ဘာပကျြစတေဲ့ လကျနကျတှပေါ။
နူကလီးယားလကျနကျတှကွေောငျ့ လယျယာ မစိုကျပြိုးနိုငျ ဖွဈသှားပွီး ကမ်ဘာ့ရာသီဥတု ဖောကျလှဲဖောကျပွနျ ဖွဈသှားရငျ လူ ဘီလြံနဲ့ခြီပွီး အစာငတျမှတျမှုကွောငျ့ အသကျဆုံးရှုံးကွရမှာပါ။ ကနျြခဲ့တဲ့သူတှကေတော့ ရောဂါဘယတှနေဲ့ သဆေုံးကွမှာပါ။
ကပျရောဂါတှဟော စဈပှဲတှထေကျ လူပိုသတျတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သဘာဝကပျရောဂါတှဟော လူသားမြိုးတုနျးဖို့ထိ မလုပျနိုငျပါဘူး။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ကပျရောဂါဖွဈရငျ ရောဂါပိုးကို ခုခံနိုငျတဲ့ လူတဈခြို့ ကနျြခဲ့လရှေိ့ပွီး အဲဒိလူတှရေဲ့ မြိုးဆကျတှကေ ရောဂါကို ပိုလို့ ပိုလို့ ခံနိုငျကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဆဈဖလဈရောဂါဟာ ဥရောပမှာ လူသတျရောဂါကနပွေီး ပုံမနျ နာဖြားမှုအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားတာပါ။
ဒါပမေယျ့ ဇီဝအငျဂငျြနီယာနညျးနဲ့ ရောဂါတှကေို ပိုပွီးဆိုးသှားအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ ကွကျငှကျတုပျကှေး ရောဂါပိုးကို ဇီဝပွုပွငျကွညျ့ရာမှာ ကူးစကျသဆေုံးနိုငျမှုနှုနျးဟာ ကွောကျဖို့ကောငျးလောကျအောငျ တိုးလာပါတယျ။
ခုလောလောဆယျမှာတော့ ဇီဝလကျနကျတှေ အသုံးပွုပွီး တိုကျခိုကျဖို့ ခကျပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြိနျကရြငျ ဇီဝနညျးပညာဟာ ဈေးသကျသာပွီး ပိုလှယျကူလာတာနဲ့အမြှ အကွမျးဖကျအုပျစုတှေ ဇီဝလကျနကျ အသုံးပွုပွီး တိုကျခိုကျကွဖို့နှုနျးဟာ ပိုပွီးမွငျ့မားလာပါတယျ။
ဉာဏျရညျဆိုတာ အရမျးအစှမျးထကျပါတယျ။ လူသားတှဟော ဉာဏျရညျမွငျ့မားလို့ အခွား အဆမတနျ အရှယျကွီးမားတဲ့ တိရစ်ဆာနျတှကေို အနိုငျ တိုကျနိုငျခဲ့ကွတာပါ။ ဒါပမေယျ့ အခုခတျေမှာတော့ ကှနျပြူတာကို ဉာဏျရညျရှိလာအောငျ ကွိုးစားလုပျဆောငျ နကွေပါတယျ။ စကားသံနဲ့ အမိနျ့ပေးခိုငျးစခွေငျးကစပွီး AI ချေါတဲ့ အသိဉာဏျတုထိပါ။
တကယျလို့ ကှနျပြူတာတှမှော အသိဉာဏျနဲ့ ကိုယျပိုငျ စဉျးစားနိုငျစှမျးရှိလာရငျ သူတို့ဟာ ကောငျးတာတှပေဲ လုပျမယျလို့ ဘယျသူ အာမခံနိုငျပါ့မလဲ?? သူတို့လဲ လူတှလေိုပဲ တခွား သတ်တဝါ သကျရှိအားလုံးကို ထိနျးခြုပျခငျြကွမှာပါ။ ကှနျပြူတာတှေ စှမျးအားမွငျ့တာနဲ့အမြှ ဉာဏျရညျလဲ တိုးတကျလာမှာပါ။ လူဉာဏျရညျရဲ့ အဆတဈရာ သာတဲ့ ကှနျပြူတာဟာ လူသားတှကေို ထိနျးခြုပျဖို့ မကွိုးစားနိုငျဘူးလား။ Terminator နဲ့ Matrix လို ဇာတျကားမြိုးတှကေို ကွညျ့ရငျ သိရှိနိုငျပါတယျ။
နာနို နညျးပညာဆိုတာ ရုပျဝတ်ထုပစ်စညျးအပျေါမှာ အကျတမျ၊ မျောလီကြူးအဆငျ့ထိ ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ နညျးပညာပါ။ အဲဒါဟာ သူ့ခညျြးတော့ အန်တရာယျမရှိပါဘူး။ အရမျးအကြိုးပွုနိုငျတဲ့ နညျးပညာတဈခုပါ။ ပွသနာကတော့ ဇီဝလကျနကျတှလေိုပဲ သူ့ကို ထိနျးခြုပျဖို့ နညျးလမျး မရှိတာပါ။
အထငျရှားဆုံးပွသနာကတော့ နာနိုပွသနာဟာ အကျတမျစကေးအထိ အတိအကနြဲ့ အရာဝတ်ထုတှကေို အလငျြအမွနျ ထုတျလုပျနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ အဲဒါကို အသုံးပွုပွီး လကျနကျတှေ ထုတျလုပျကွရငျ ဘယျလိုနမေလဲ။
နာနိုနညျးပညာနဲ့ ထုတျလုပျလို့ရမယျ့ လကျနကျတှဟော သနေတျတှတေငျမကပဲ အရှယျအစား အရမျးသေးငယျတာတှလေဲ ပါပါလိမျ့မယျ။ အဆိပျလကျနကျတှကေို ကိုယျထိစခေငျြတဲ့လူတှပေဲ ထိအောငျ တိုကျတာမြိုး၊ အရမျးသေးငယျတဲ့ စကျရုပျလေးတှနေဲ့ လူတှကေို စောငျ့ကွညျ့တာမြိုးတှေ လုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ နူကလီးယား နညျးပညာနဲ့ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲခွငျးတှကေိုလဲ နာနိုနညျးပညာ လကျဝယျရှိသူတှကေ သုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ကောငျးကငျကွီးကို မော့ကွညျ့လိုကျပါ။ တိတျဆိတျနပေါလိမျ့မယျ။ ဂွိုလျသားတှကေို မတှရေ့သေးတာက သကျရှိဖွဈတညျနိုငျတဲ့ ဂွိုလျတှဟော အရမျး ရှားပါးလို့လား။ အသိဉာဏျမွငျ့ မြိုးစိတျတှပေဲ သူ့တို့ဘာသာ ဖကျြစီးမိပွီး ကိစ်စတုံးသှားကွတာမြားလား။
ကြှနျတျောတို့ မသိနိုငျသေးတဲ့၊ ရှောငျလှဲလို့မရတဲ့ အနာဂါတျတဈခုက အရှမှေ့ာ စောငျ့ကွိုနပေါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ လူတှေ မရှိမှ ပိုကောငျးမယျဆိုတဲ့ ပညာရှငျ ခပျရူးရူးတှေ၊ အကွမျးဖကျသမားတှကေ ခုခြိနျမှာ ဘာတှေ ကွံစညျနလေဲဆိုတာ မသိနိုငျသေးပါဘူး။ အပျေါက ကပျဘေး လေးခုအပွငျ အခွား မသိနိုငျသေးတဲ့ အရာတှေ အမြားကွီး ရှိပါသေးတယျ။
GM ရဲ့ တခွား ဗဟုသုတနှငျ့ ပကျသကျသော ဆောငျးပါးမြားကို ဖတျခငျြရငျ http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မှာအလှယျတကူ ဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Previous: လူမျိုးဘာသာမရွေး ဘယ်လိုတရားထိုင်မလဲ
Next: ရူပါလန်းဖို့ မနက်တိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည့် အလေ့အကျင့်(၁၀)ခု